Naing BSell | Item - အသားဖြူဆပ်​ပြာခဲ
forever family online shop
Skinari Volume Finish Mascara
Jayjun Collagen bounce mask 10 sheets
Yahee Slim Gel
😱 အသားရည်က်ို အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပဲ အံ့သြလောက်အောင် ဖြူဖွေးသွား စေတဲ့ ဆပ်ပြာလေး နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်...😍
➡️ ၁ ကြိ်မ်တည်းတိုက်ကြည့်ယုံနဲ့ ထူးခြားမှုကို စတင်တွေ့ရှိ ရမှာပါ... 👈
ပြောပြပေးမယ်နော်။ သူက အသားအရည်ကို
အချိန် 2mins ပွတ်တိုက်လိုက်ရုံနဲ့ပဲ နဂိုထက် တစ်ဆင့်ဖြူဖွေးတဲ့အသားအရည်ကိုရရှိစေတာပါ။🌟😲
ပစ္စည်း စစ်မှန်ကြောင်းအာမခံပါတယ် 👍
ဈေးနှုန်း ၁ တုံးမှ 3000ks
ခဏပဲဖြူတာလား 🤔 ??????
ရေချိုးတိုင်း မျက်နှာကလွဲပီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုတိုက်လို့ရပါတယ်။
ချက်ချင်းဖြူလာတော့ဆိုးကျိုးရှိမှာပေါ့ 🤔 ??????
လုံးဝစိတ်ပူဖို့မလိုပါဘူးနော် FDA & GMP တရားဝင်တင်ထားပီးသားမို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ထုတ်ကုန်တွက်အသုံးပြုတဲ့ ကုန်ကြမ်းတေက 100% safe ဖြစ်ပီး 100% Natural ဖြစ်တဲ့ နာနတ်သီး ၊ စတော်ဘယ်ရီ ၊ စပျစ်သီးနဲ့ ပျားရည်ကို အဓိကထားပီးထုတ်လုပ်ထားတာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ အိန္ဒိယ ၊ ဖိလစ်ပိုင် ၊ စင်ကာပူ နဲ့ အခြားမြို့ကြီးများတွက်လည်းအသုံးပြုနေကြပီးဖြစ်ပါတယ်။
👉သင်ဟာ BumeBimeအသားဖြူဆပ်ပြာကိုသုံးစွဲဖူးပါသလား? မသုံးဖူးသေးဘူးဆိုရင် အခုပဲအသုံးပြုပြီး ထူးခြားမှု့တွေကိုရယူလိုက်ပါ👏
လျှင်မြန်ပြီးထိရောက်သော အာနိသင်ပါဝင်တဲ့ BumeBimeအသားဖြူဆပ်ပြာမှာ သဘာဝအတိုင်းသစ်သီးများကို အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။
၃ မိနစ်ကနေ ၅ မိနစ်လောက်ပွတ်တိုက်ပေးရုံနဲ့ နဂိုထက် တစ်ဆင့်ဖြူဖွေးတဲ့ အသားအရေကိုရရှိစေပါတယ် FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီး အန္တရာယ်ရှိသော ဓါတုပစ္စည်းများ မပါဝင်သောကြောင့် မည်သည့်အသားအရေမှာမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်👍👈
✅ညိုမဲနေသော အသွင်အပြင်ကို လျော့ကျစေပါသည်💯
✅အမာရွတ်များ အသားအရေမညီညာခြင်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်💯
✅နံနက်နှင့် ညနေပိုင်းများတွင် BumeBimeအသားဖြူဆပ်ပြာကို အသုံးပြုပြီး ဗက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကိုပါနှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်💯
❗️ယခု BumeBimeအသားဖြူဆပ်ပြာ အတုများဟာ အလွန်ဈေးပေါသောဈေးနှုံးများဖြင့် ဈေးကွက်မှာဝင်ရောက်နေပါပြီ ပစ္စည်းအတုများအသုံးပြုမိပါက ရလဒ်ကောင်းများရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ😱😱 ဒါကြောင့်ဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချရတဲ့ မူရင်းဆပ်ပြာအစစ်ရဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပါရစေ💯🙏
🎁မှာယူလိုပါက ကျေးဇူးပြုပြီး Message Box မှဆက်သွယ်ပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙏